☔ ဖွဲဖွဲရွာနေသည်။ စီးကရက်က မျက်နှာရှေ့တွင် ပျံဝဲနေသည်။ နောက်ကျောကို လေတဟူးဟူးတိုက်နေသည်။ ညို့မှိုင်းသော ကောင်းကင်မှာ ထူထဲသော ☁ တိုက်တို့ လွင့်မျောနေသည်။
ဒီနေ့ ☼ မပွင့်။ ☁ ထူပြီး မိုးသည်းနေသည်။ ☂ တစ်လက်ဆွဲပြီး ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ ရုံး ⌛ နောက်ကျနေပြီ။ ရထားပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ☎ မြည်လာသည်။
/-()—() ~ ()–() ~ ()–() ~ ()–()
တစ်ဘက်က ♀ တစ်ယောက်စကားသံ ထွက်လာသည်။
“ငါ ထရင်နတီ… ငါတို့ ☽☆ ကပဲ အွန်လိုင်းမှာ ပြောခဲ့တယ်လေ…”
သီဟ ရုတ်တရက် အံ့ဩသွားသည်။ ထရင်နတီဟာ နာမည်ကြီး ဟက်ကာတစ်ယောက်။ ဒါပေမဲ့ သူ♀ဆိုတာ မသိခဲ့။
ရှင့်နောက်မှာ ♂ နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ လှည့်မကြည့်နဲ့။ ဒီ ယုန်တွင်းထဲက ထွက်ချင်ရင် ဖဲချပ်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆီကို လာခဲ့။
စကားတောင်မဆုံးသေး။ တစ်ဘက်က ☎ ချသွားသည်။ ရထားပြတင်းမှန်က တဆင့် နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သတင်းစာတစ်စောင်စီနှင့် လူနှစ်ယောက်က သူ့နောက်မလှမ်းမကမ်းမှာ ရပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခေါင်းထဲမှာရှုပ်နေသည်။ ညက အွန်လိုင်းမှာ မက်ထရစ်ဆိုတာ ဘာလဲဟု ထရင်နတီကို မေးမိတာ သတိရသည်။ သူက သိချင်ရင် နောက်နေ့ပြောမယ်လို့ ပြောထားခဲ့တာ သတိရသည်။ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်သွားပြီး အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်တာလည်း မှတ်မိသလိုလိုရှိသည်။ ရထားက ဒိုဘီဂေါက်ရောက်၍ ရပ်သွားစဉ် လူအများအပြားဆင်းသွားကြသည်။ ထိုနှစ်ယောက်က မလှုပ်မယှက်။
“တီ.. တီ.. တီ..”
အသံမြည်ပြီး တံခါးပိတ်လုပိတ်ခင်တွင် သူ လှစ်ခနဲ ခုန်ထွက်လိုက်သည်။ ရထားကတံခါးပိတ်ပြီး ထွက်သွားသည်။ သတင်းစာကိုပစ်ချပြီး မှန်ပြတင်းက ကြည့်နေသော လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ခရမ်းလိုင်းမီးရထားဘက်သို့ လမ်းလျှောက်လာရင်း တွေးသည်။ ဒီလူတွေ ဘယ်သူတွေပါလိမ့်။ စပ်စုချင်စိတ်ကြောင့် တစ်ခါတလေ ဟက်ကာတစ်ပိုင်းလုပ်သော်လည်း ကြီးကြီးမားမား ကိစ္စတို့နှင့် တစ်ခါမှ မပတ်သက်ဖူးပေ။
ဖဲချပ်ခေါင်းဆောင်….။ ဂျိုကာကိုပြောတာလား။ 1♤ ကို ပြောတာလား…။ အိပ်ရေးမဝသောကြောင့် ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဝေဝါးနေသည်။ ခေါင်းထဲတွင် လက်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အဲလစ်ရဲ့ ထူးဆန်းသောကမ္ဘာမှာ ဖဲချပ်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဘုရင်မကြီးဖြစ်သည်။ ♛ စတောင်း ကိုပြောတာဖြစ်မည်။ ✆ မြည်လာသည်။ ရုံး HR ကဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ အရေးပေါ်ခွင့်ယူမည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ အခု ဘယ်မှာလဲဟု မေးနေသေးသည်။ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ☎ ချလိုက်သည်။
♛စတောင်းရောက်တော့ ရထားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်။ စက်လှေကားမှ ဆင်းမည်အပြုတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ပခုံးကို လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လောင်းကုတ်အနက်ခြုံကာ နေကာမျက်မှန်နက် တပ်ထားသော မျက်နှာဖြူအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
“လိုင်းယွန်းစလေယာဆိုလို့ လူကောင်အကြီးကြီးမှတ်နေတာ လတ်စသတ်တော့ သေးသေးလေးပဲ။”
စိတ်ထဲတွင် ထောင်းကနဲဖြစ်သွားသော်လည်း တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်သည်။ ငါးပေခြောက်ရှိသော သူသည် ဒေါက်မြင့်စီးထားသော အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးအမြင်တွင် ညှက်နေပေလိမ့်မည်။
ထရင်နတီသည် ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲပြီး ချန်ဂီဘက်သွားသော ရထားပေါ်ပြေးတက်လိုက်သည်။ ရထားတွဲထောင့်က နှစ်ယောက်တွဲခုံတွင် ကျွန်တော်တို့ ထိုင်လိုက်ကြသည်။ ရုံးတက် ⌚ လွန်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ရထားပေါ်တွင် လူနည်းနေသည်။
“ရှင့် ☎ ခဏပြပါဦး။”
ကျွန်တော့် ☎ ကို ထုတ်ပေးလိုက်ရာ ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူပြီး ရထားနှင့် ပလက်ဖောင်းကြားသို့ လှမ်းပစ်ချလိုက်သည်။ လှမ်းဆွဲလိုက်သော်လည်း မမီတော့။ ရထားက တံခါးပိတ်ပြီး ထွက်လာပြီဖြစ်သည်။
“ဟာ.. ဟာ… ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ… အဲဒါ ℹ☎4 ကွ သိရဲ့လား။”
“သေချာနားထောင် ရှင့်နောက်မှာ ☎ ကတဆင့် နောက်ယောင်ခံလိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီရက်ပိုင်း အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဘာတွေများ မက်သေးလား။”
ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသော်လည်းသေချာမှတ်မိအောင် ကြိုးစားစဉ်းစားရင်း ​ဖြေလိုက်သည်။
“လူတွေအများကြီး ငါ့ကိုဝိုင်းချုပ်ပြီး ပိုးကောင်တစ်ကောင်ကို ငါ့ဗိုက်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်လို့ ဒီနေ့မနက်က မက်တယ်။”
ထရင်နတီသည့် သူ့ကုတ်ထဲမှ သင်္ကြန်သေနတ်နှင့်တူသော ကိရိယာတစ်ခုကို ထုတ်လိုက်သည်။
___ /:::::::::::____ _ _.”_
/|| ||`.______.-`|| | |_\_\_____/_ _.-‘\_\_
.|-| ||===|| ||===| ||_||||____|_| .-‘|||||
‘|-| ||===||===========||===| ||_||||____|_|`-._|||||
||___||___________||___|_|/ //// `-._////
) ) _____ (
/`–.._/ .’| ( ‘.
) ( ( ‘./ ) )
/`–.___ ‘._____.’ /
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူ့မျက်စိကို ယင်းသေနတ်ဖြင့်တေ့ပြီး ခလုတ်ညှစ်လိုက်သည်။ သီဟမှာ မှင်သက်မိသွားစဉ် နာကျင်သောခံစားချက်နှင့်အတူ မျက်လုံးထဲမှ တစ်စုံတစ်ခု ထွက်သွားသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မျက်လုံးကို ယောင်ယမ်းပွတ်လိုက်သည်။ မျက်လုံးတွင် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေသော်လည်း ဘာမှ မဖြစ်။ သေနတ်ကိရိယာထဲတွင် ကင်း​ခြေများနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော အကောင်တစ်ကောင် ယက်ကန်ယက်ကန်နှင့် ရောက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ရှင့်ကို သူတို့ Bug သွင်းထားတယ်။ နောက်ယောင်ခံလိုက်ဖို့ပေါ့။ အခုတော့ ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး။”
ထရင်နတီက ကိရိယာကို ပြန်သိမ်းရင်း ပြောလိုက်သည်။
“ကျွန်မဆီမှာ ရှင်သိချင်တဲ့ အဖြေရှိတယ်… တကယ်တော့ မက်ထရစ်ဆိုတာ….”
ရုတ်တရက် တံခါးပေါက်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ထရင်နတီက ခုန်ထလိုက်သည်။
“ကံမကုန်ရင် ပြန်ဆုံသေးတာပေါ့။ ရှင်တစ်ခုမှတ်ထားဖို့က ရှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အတုအယောင်ချည်းပဲ။”
သူက အော်ပြီး နောက်ဘက်က တွဲထဲသို့ ပြေးထွက်သွားသည်။ ခဏချင်းမှာပင် လူအုပ်ကြားထဲရောပြီး ပျောက်သွားသည်။ ရထားသည် ရပ်ဖဲပလေ့စ်တွင်ရပ်အသွား တံခါးအပွင့်တွင် စောစောကတွေ့ထားသော လူနှစ်ယောက်နှင့့် တက်ဆီဒိုဝတ်ကာ မျက်မှန်အနက်တပ်ထားသော မျက်နှာသေနှင့် လူနှစ်ယောက်ကိုပါ သူတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုထဲမှ တစ်ယောက်ကို သူ ရုတ်ချည်း မှတ်မိလိုက်သည်။ ညက အိပ်မက်ထဲမှာ ပိုးကောင်သွင်းလိုက်သော လူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ပုံပန်းသွင်ပြင်မှာ ဟောလိဝုဒ်ကားထဲမှ အေးဂျင့်များအတိုင်းဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် ဒီလိုဝတ်စားပုံနှင့်လူများကို တော်ရုံမတွေ့ရ။
စိတ်ထဲတွင် ဒွိဟတို့နှင့် ပြည့်နှက်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း မသိစိတ်ထဲတွင် အလိုလိုသိနေသည်က သူပြေးမှ ဖြစ်မည်။ ဝင်ထွက်နေသော လူများကို တိုးကြိတ်ကာ ရထားပေါ်မှ ပြေးထွက်လိုက်သည်။ စက်လှေကားပေါ်ပြေးအ ⇑ တွင် မနက်ကတွေ့သော လူနှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်က သီဟကိုတွေ့သွားပြီး အော်ပြောလိုက်သည်။
နောက်လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ သူ စက်လှေကားထိပ် အမြန်ပြေးတက်လိုက်သည်။ မရီနာဘေသို့သွားသောရထားထဲ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးဝင်လိုက်သည်။ ရထားသည် သီဟဝင်အထိုင်မှာပင် ချက်ချင်းထွက်သွားသည်။ ရထားတွဲထဲတွင် သူတစ်ယောက်သာရှိသည်။ သူတို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မမီနိုင်တော့။ တွေးရင်းပြုံးလိုက်သော်လည်း အပြုံးက လမ်းခုလတ်တွင် ရပ်သွားသည်။ အခြားတွဲမှ ဤတွဲဆီသို့ လျှောက်လာသည်က ဝတ်စုံနက်နှင့် လူ။ ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ။ အောက်ထပ်မှ အပေါ်ထပ်သို့ ဤမျတိုတောင်းသော အချိန်ပိုင်းအတွင်း တက်လာရန် မည်သို့မှ မဖြစ်နိုင်။ ထိုလူက အင်္ကျီရင်ဘတ်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ခုကို နှိုက်ထုတ်လိုက်သည်။ ပစ္စတိုတစ်လက်။ သီဟ မလှုပ်ရဲတော့။ နဖူးမှ ချွေးစက်တို့ ကျလာသည်။ ထိုလူက ရှေ့တွင် ရပ်လိုက်သည်။
“ဟဲလို မစ္စတာသီဟ… ငါတို့ပြန်တွေ့ကြပြီနော်…”
“ငါ့နာမည်က စမစ်။ ငါ့သဘောနဲ့ငါဆိုရင်တော့ မင်းကို မြန်မြန် ပစ်သတ်လိုက်ပြီ။ မင်းလည်း ဘဝအသစ်တစ်ခု မြန်မြန်ရ၊ ငါလည်း သက်သာတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မင်းကို ၄÷ သမှုနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ချင်တဲ့လူတွေရှိနေလို့ သတ်လို့ မဖြစ်သေးဘူး။”
သူက သီဟဘေး ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ခံစားမှုမရှိသော သူ့မျက်နှာက အေးစက်နေသည်။
“- နဲ့ ×÷ ပြီး + နေကြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာတုလေးထဲမှာ မင်းတို့ကို လိုက်ထိန်းနေရတာ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက အလုပ်သမားလိုပဲ။ ပျင်းဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ရွံဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ခက်တာက ငါ့တာဝန်က ဒါပဲဖြစ်နေတော့….။”
သူပြောသော စကားများကို သီဟ နားမလည်ပါ။ လိုက်မီဖို့ မနည်း ကြိုးစားနေရသည်။ သူက သေနတ်ကို ရင်ဘတ်က အိတ်ထဲ ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြီး သူ့ကို လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင် နောက်ကျိ ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဘာကိုမှ နားမလည်နိုင်။ ဒီလူတွေဘယ်သူတွေလဲ။ သူထောင်ချခံရမှာလား။ စီးတီးဟောက နာမည်ကြီးရှေ့နေက ဘယ်သူပါလိမ့်။
မရီနာဘေဆန်း အပေါ်ဆုံးထပ်ရေကူးကန်ဘောင်မှဆင်းလိုက်လျှင် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ထိုပလက်ဖောင်း၏ လက်ရန်းနောက်တွင် လေဟာပြင်သာ ရှိတော့သည်။ လက်ထိပ်တန်းလန်းနှင့်သီဟသည် ပလက်ဖောင်း လက်ရန်းပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ သူ့ရှေ့တွင် စမစ်အပါအဝင် အေးဂျင့်သုံးယောက်ရှိနေသည်။ သူ့ပါးစပ်တွင် မီးမညှိရသေးသော စီးကရက် တစ်လိပ် ခဲထားသည်။
“ခင်ဗျားတို့ သိလား… ကျုပ်ဘာကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတာ…”
မျက်နှာသေနှင့် လူသုံးယောက်ဆီမှ စကားတုံ့မရ။
သူက အိတ်ထဲမှ မီးခြစ်ကို လက်ထိပ်တန်းလန်းဖြင့် ခဲရာခဲဆစ်ထုတ်ပြီး စီးကရက် မီးညှိလိုက်သည်။ လေတိုက်နေသောကြောင့် တော်ရုံနှင့် မစွဲ။ စီးကရက်နှင့် မီးခြစ်မှာ မြေညီထပ် အစောင့်၏အိတ်ထဲမှ နှိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆေးလိပ်သောက်ရင် အသက်တိုမယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောလို့… အခုတော့ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး…”
MRT မှအထွက် ကားလမ်းနံဘေးတွင် သူ ကားများကြားမှ ရုတ်တရက် ထွက်ပြေးပြီး တက်စီတစ်စင်းပေါ် ပြေးတက်ခဲ့သည်။ တက်စီသမားက စမစ်ဖြစ်နေသည်။ သူ့ကိုအတင်းတွန်းချပြီး ကားကိုမောင်းပြေးလာခဲ့သည်။ မရီနာဘေဆန်း နံဘေးတွင် သူ့ကား ပိတ်မိသွားသည်။ သူတွေ့သမျှလူအားလုံးသည် စမစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားကြသည်။ အခြားအေးဂျင့်နှစ်ယောက်ပါ ရောက်လာသည်။ သူ လမ်းတစ်လျှောက်လူများကိုတွန်းထိုး၍ ထွက်ပြေးလာရာ အဆောက်အအုံထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်လာသည်။ သူ့တွင် ပြေးစရာလမ်း မရှိတော့။ သို့သော် သူ့စိတ်ထဲတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နေပြီးဖြစ်သည်။
“ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ အိပ်မက်ပဲ…။ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ကို ဘာကြောင့် လိုချင်နေလဲဆိုတာ ကျုပ်မသိဘူး။”
သူစီးကရက်ကို တစ်ချက်ဖွာ၍ ရှိုက်ထုတ်လိုက်သည်။ မီးခိုးငွေ့များက အကွင်းလိုက် တက်သွားသည်။ မိုးတစ်စက် သူ့မျက်နှာပေါ်ကျလာသည်။ ☔ ရွာတော့မည်။
“ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ဂရုမစိုက်ဘူး…။ ကျုပ် အိပ်မက်က နိုးထတော့မယ်။”
အေးဂျင့်သုံးယောက် သူ့နားကို ကပ်လာပြီး အင်္ကျီစများကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကြသည်။ သူက တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး အရှိန်ယူကာ လက်ရန်းပေါ်မှ လှန်ချလိုက်လေသည်။
မရီနာဘေဆန်း အပေါ်ဆုံးထပ်မှ လူလေးယောက် လုံးထွေးပြီး ပြုတ်ကျလာသည်။ စမစ်က သူ့လည်ပင်းကို ညှစ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အခြားအေးဂျင့်နှစ်ယောက်မှာ လေထဲတွင် ပြုတ်ကျလာရင်း သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေကြသည်။
မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသည်။ စီးကရက်က မျက်နှာရှေ့တွင် ပျံဝဲနေသည်။ နောက်ကျောကို လေတဟူးဟူးတိုက်နေသည်။ ညို့မှိုင်းသော ကောင်းကင်မှာ ထူထဲသော ☁ တိုက်တို့ လွင့်မျောနေသည်။ သို့သော် သူ့စိတ်တို့ ကြည်လင်နေသည်။
လူလေးယောက် သေဆုံးမှုသည် ထိုနေ့ညနေ သတင်းစာထဲတွင် ပါလာခဲ့သည်။ သူ့ အသုဘကို စမစ်လာပို့သည်။
သူ မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ✈ ဝမ်းဗိုက်နှင့်တူသော အခန်းငယ်တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီဝတ်ထားသော လူများက သူ့ကိုပြုံးလျက်ကြည့်နေကြသည်။ အားလုံးက ဆံပင်များကို ကတုံးနီးပါး ရိတ်ထားကြသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် သူသိသောသူ တစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထရင်နတီ။ လူထွားကြီးတစ်ယောက်က သူလဲလျောင်းနေရာသို့ လျှောက်လာပြီး လက်ဆန့်တန်းပေးလိုက်သည်။
“နက်ဗျူချက်နက်ဇာမှ ကြိုဆိုပါတယ် လိုင်းယွန်းစလေယာ…။”
ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ သူနားမလည်ပါ။ သူသိတာ တစ်ခုက အိပ်မက်က နိုးပြီဆိုတာကို ဖြစ်သည်။ လက်တစ်ဘက်ကို အားယူမြှောက်ရင်း ကမ်းပေးသော ✌ ကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်လေသည်။
Tags: fantasy, Lionslayer, marina bay sands, Matrix, mrt, short story, sifi, Singapore, trinity
Unicode Roundup (June 2011)
ဒီပို့စ်က မြန်မာယူနီကုဒ် လက်ရှိ တိုးတက်မှု ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာ မှတ်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Keyboard on iOS by ttkz (မှတ်ချက် - ယူနီ မကုတ်တော့ဘဲ ဒဒွေးဖြင့်သတ်ကာ ယူနီကုဒ်ကြပါတော့ရန်။)
၁။ ဒီလင့်က ယူနီကုဒ်စည်းမျဉ်းကို သုံးနေတဲ့ ဖောင့်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ OSX Lion မှာ ဖောင့်နှစ်မျိုးထပ်ပါပေမဲ့ Publish မလုပ်မချင်း ဖောင့်နာမည်နဲ့ အရေအတွက် ကို အတည်ပြုမရသေးတာကြောင့် ထပ်မဖြည့်ထားသေးပါ။ နောက်ပိုင်း ဖောင့်တိုင်းက ယူနီကုဒ်စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာလာရင် ဒီစာရင်းကို အမီလိုက်ဖြည့်နိုင်ဖို့တောင် လွယ်မယ်မထင်ပါ။ လောလောဆယ် ဖောင့်စာရင်းက Myanmar3, Padauk, Parabaik, MyMyanmar, Xenotype, Yunghkio, Masterpiece Uni Sans, Thanlwin တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒါကတော့ လက်ရှိယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေအတွက် သုံးနေတဲ့ နည်းပညာ တွေကို စာရင်းပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး Basic Opentype Features တွေ ကို ထောက်ပံ့ရင် ဘယ် OS ဘယ် ပလက်ဖောင်းမှာမဆို အလုပ်လုပ်တဲ့ ယူနီကုဒ်ဖောင့် ရှိပါပြီ။
Burmese Support in OSX Lion
(က) အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း OSX Lion က မြန်မာစာကို Support လုပ်ပါပြီ။ Lion သုံးရင် မြန်မာစာဖတ်ဖို့ ဖောင့်သွင်းတယ်ဆိုတာ မလိုတော့ပါ။ Masterpiece Uni Sans, MyMyanmar, Xenotype နဲ့ Myanmar3 တို့လည်း OSX နဲ့ iPhone iPod နဲ့ iPad တွေအတွက်သုံးတဲ့ iOS မှာ သုံးနိုင်ပါပြီ။
(ခ) Myanmar3, Padauk, Parabaik, MyMyanmar, Yunghkio, Thanlwin တို့ Windows XP sp3 နဲ့အထက်မှာ ရပါတယ်။
(ဂ) Linux Distros တွေအတွက် Pango Module ပါရင် Windows မှာ ရတဲ့ ဖောင့်တွေ အကုန်သုံးလို့ ရပါတယ်။ Pango ကို နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Linux Desktop ဗားရှင်းတွေ အားလုံးလိုလိုမှာ Built-in ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Masterpiece Uni Sans က Pango အတွက် Native Version ရှိပါတယ်။
Myanmar Unicode on Adobe Photoshop
(ဃ) Adobe က ဘယ် OS မှာမဆို သူ့ထုတ်ကုန်တွေမှာ Basic Opentype Features တွေသာ သုံးခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ရှေ့နောက်ပြန်စီစဉ်ဖော်ပြရတဲ့ ယူနီကုဒ်တွေ (ခမာ၊ မြန်မာ) ယူနီကုဒ်တွေ Adobe CS မှာ အမှန်မပေါ်ပါ။ Thanlwin ဖောင့်ကတော့ Opentype တစ်မျိုးတည်းသာ သုံးထားတဲ့ဖောင့်ဖြစ်တာကြောင့် Windows နဲ့ OSX က Adobe CS Suite တွေမှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Opentype တစ်မျိုးတည်းသာ ထောက်ပံ့တဲ့ Environment မှာတောင် ယူနီကုဒ် အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
(င) Android, Nook, Kindle မှာ ယူနီကုဒ်အမှန်မပေါ်သေးပါ။ ဘယ်နေရာ ယူနီကုဒ် သုံးလို့ရပြီ၊ ဘယ်နေရာမှာ မရသေး စတာတွေအတွက် သိသာအောင် ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ MyanmarLanguage.Org ကတော့ ယူနီကုဒ် Developers တွေ၊ မြန်မာစာတိုးတက်ရေးကိုအားပေးသူတွေနဲ့ မြန်မာ NLP Lab ကလူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီလိုရင် အဲမှာ ဝင်မေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဒါကတော့ Mysteryzillion က ပြုစုထားတဲ့ Unicode Package ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်သုံးရာမှာ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို အစုံအလင်ထည့်ပေးထားရုံမက ဖောင့်နဲ့ ကီးဘုတ်တွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
၅။ ICU ကို အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Firefox 4, Chrome, Chrome OS, OSX Lion, iOS5 တွေမှာ Support လုပ်ပါပြီ။ ICU ဆိုတာ အတိုပြောရရင်ဆော့ဝဲတွေမှာ မြန်မာစာကို မြန်မာလိုအသင့်သုံးလို့ရအောင် Implement လုပ်ပေးထားတဲ့ Library လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ စာမြင်ရအောင်လုပ်တဲ့ ဖောင့်သက်သက် မဟုတ်ဘဲ ကွန်ပျူတာကို ဘယ်ပလက်ဖောင်းမှာမဆို မြန်မာစာနဲ့ တွက်ချက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ စံစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(က) ICU support လုပ်ထားရင် မြန်မာစာလုံးတွေကို ဝဏ္ဏအလိုက် Select မှတ်နိုင်၊ Delete လုပ်နိုင်ပါပြီ။ OSX နဲ့ Linux တွေမှာ OS Level မှာ ဘယ်ဆော့ဝဲမဆို အလွယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows မှာတော့ Firefox4နဲ့ Chrome ဘရောက်ဆာတွေမှာ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Feature ကြောင့် စာလုံးကို Select မှတ်လိုက်တဲ့အခါ အောက်မြစ် အသတ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။
Linux Myanmar Sorting
Burmese Sorting on OSX
(ခ) မြန်မာလို အက္ခရာစဉ်နိုင်ပါပြီ။ Linux နဲ့ OSX Lion မှာ OS Level မှာ အလွယ် မြန်မာလို စဉ်နိုင်ပါပြီ။ မြန်မာစာ၊ စာအုပ်စာရင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ လူစာရင်း စတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ Feature ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် Windows မှာ မြန်မာလို မရသေးပေမဲ့ Myanmar Locale ကိုသွင်းလို့ဖြစ်စေ၊ OpenOffice/LibreOffice ကို သုံးလို့ဖြစ်စေ၊ မြန်မာလို အလိုအလျောက်စဉ်နိုင်ပါပြီ။
Calculate With Myanmar Digits
(ဂ) OS Level မှာ မြန်မာလို တွက်နိုင်ပါပြီ။ ဒီ Feature ကြောင့် ယူနီကုဒ်သာမက ယူနီကုဒ်ပွိုင့်တွေကို ယူသုံးထားတဲ့ ယူနီကုဒ်မဟုတ်တဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့လည်း ဂဏန်းတွက်လို့ရပါပြီ။ အချိန်၊ နေ့၊ လ တွေကိုတော့ ယူနီကုဒ် စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာထားတဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့သာ တွက်ချက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OSX, Linux မှာ Native သုံးနိုင်ပြီးတော့ Windows မှာတော့ Locale သွင်းလို့ဖြစ်စေ၊ OpenOffice/LibreOffice သုံးလို့ဖြစ်စေ သုံးနိုင်ပါပြီ။
(ဃ) မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ ရက် လ ဂဏန်း နိုင်ငံ စတာတွေကို မြန်မာလို မြင်နိုင်ပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း OSX နဲ့ Linux မှာ ရပြီးတော့ Windows မှာတော့ Loc​ale သွင်းဖို့ လိုပါတယ်။
Myanmar Unicode Texts Justified (screenshot credit by ttkz)
(င) စာလုံး စာပိုဒ်တွေ Justify လုပ်တဲ့အခါမှာ Unicode မဟုတ်ရင် ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ယူနီကုဒ်မှသာ သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ဝဏ္ဏတွေ အုပ်စုလိုက်ရှိပါတယ်။ သဝေထိုးရရစ်တွေ ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ ယူနီကုဒ်မဟုတ်တဲ့ ဖောင့်တွေကိုသုံးရင် ရှေ့မှာ သတ်သတ်ကွဲထွက်ကုန်ပါတယ်။
၆။ OSX နဲ့ Linux မှာ မြန်မာစာပါတာဟာ သူတို့ကို ထည့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလို့ ပါလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ ထည့်ပေးတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုထည့်ပေးလို့ရအောင် ယူနီကုဒ် Developers တွေနဲ့ မြန်မာ NLP တို့က ယူနီကုဒ်စံများ အဆိုပြုခြင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ICU CLDR စတဲ့ Library များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယူနီကုဒ်စံကို အခြေခံပြီး ဖောင့်ဖန်တီးရင် လိုအပ်မယ့် အချက်တွေ၊ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ စာလုံးပုံစံတွေ ပြုစုပေးခြင်း စတဲ့ ဖန်တီးပေးတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် Main Vendors နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်နဲ့ ဂူးဂဲလ်မှာ လည်း မြန်မာစာ စပါဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ သတင်းကောင်းပါးလိုပါတယ်။ မြန်မာစာကို Support လုပ်ဖို့အတွက် သူတို့မှာ ဘာလိုလဲ၊ ဘာကြောင့်မလုပ်ပေးသေးတာလဲ၊ ကိုယ့်ဘက်က ဘာလုပ်ပေးရမလဲ၊ တိုက်ရိုက်မသွားဘဲ ကွေ့ဝိုက်သွားလို့ရတဲ့ နည်းတွေရှိလားဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းထားပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် ဒီ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသာမက ဘယ် Platform ဘယ် ကုမ္ပဏီ မဆို မြန်မာစာကို Support လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်လား၊ အနှစ် ၂၀ လား လောက်အထိ တွေးမျှော်စရာ မလိုတော့တဲ့ အချိန် ရောက်နေပါပြီ။
Burmese Wikipedia Logo
၇။ ယူနီကုဒ်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပါဘူး။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ဒီနေ့ ဆောင်းပါး ၆၀၀၀ (ခြောက်ထောင်) ပြည့်ပြီး ဝစ်ရှင်နရီမှာ ၁၁၃၀၀၀ (တစ်သိန်းတစ်သောင်းသုံးထောင်) ရှိပြီဆိုတာ တစ်ခါတည်း စာရင်းတို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကို အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားပြီး ကိုးကားချက် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားတဲ့ လွတ်လပ်စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့၊ အသံထွက်၊​ရင်းမြစ်၊ အသုံးအနှုန်း၊ ဘာသာပြန် အပြည့်အစုံပါတဲ့ လွတ်လပ်အွန်လိုင်းအဘိဓာန် ဖြစ်လာဖို့ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ဝင်ကူကြဖို့ပါ။ ဒါကိုလည်း ကြုံရင် ကြုံသလို ဘွန္တောလုပ်ပါတယ်။
Tags: burmese, burmese support in windows, iOS5, lion OSX, Myanmar, sorting, Unicode, update
ယူနီကုဒ်သုံးသူများ ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်ဝမည်
ယူနီကုဒ်သုံးသူများ ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်ဝမည်။ မသုံးလျင် ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်မည်။ ဤစာကို ရသူတိုင်း မိမိအသိမိတ်ဆွေ ငါးယောက်၏ FB Wall ပေါ်တွင် ပြန် Share ပါ။ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ ယူနီကုဒ်မရှိသေးသော ကွန်ပျူတာငါးလုံးကို ယူနီကုဒ်အတင်းအကြပ်သွင်းပါလေ။ (လိုအပ်လာပါက လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်သုံးပါ။)
ဒလမှ အကြော်သည် ဒေါ်ဘုမ ယူနီကုဒ်သုံးသဖြင့် အကြော်ရောင်းကောင်းသည်။ (ဟင် ဘာဆိုင်လို့လဲ)။
စင်ပူမှ ကိုကျောက်လုံး ယူနီကုဒ်သုံးသဖြင့် ပီအာအလွယ်ရသည်၊ တိုတို လေးသန်းဖိုးပေါက်သည်။
ရန်ကုန်မှ ဦးပု မသုံးသဖြင့် ခွေးဆွဲခံရသည်။
တောင်ကြီးမှ လျောင်ကီး မသုံးသဖြင့် ခေါက်ဆွဲဆိုင်လူမကျ။
ဤသည်ကား ပထမံဆြာဆန်း တစ်ရေးနိုးမက်သော အိပ်မက်အလိုတည်း။
Tags: chain letter, humour, joke, Myanmar, spam, Unicode
သိထိလ နှင့် ဓနိတ ကြိယာအတွဲများ
Burmese Unaspirated and Aspirated Consonants
သံပျော့ သိထိလ အက္ခရာတွေက က, ဂ, င, စ, ဇ, ဉ , ဋ, ဍ, ဏ, တ, ဒ, န, ပ, ဗ, မ တို့ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဟ သံကပ်လိုက်ရင် ခ, ဃ, ဆ, ဈ, ဌ, ဎ, ထ, ဓ, ဖ, ဘ တို့ရတယ်။ သံတင်း ဓနိတ အက္ခရာတွေလို့ ခေါ်တယ်။ (သံပြင်း သံညင်း ဖြစ်တဲ့ ဃောသ အဃောသနှင့် မရောပါနှင့်)။ မြန်မာစာမှာ မှတ်သားစရာ တစ်ခုက သိထိလကို ဟ သံ ကပ်လိုက်ရင် (ဓနိတ သို့မဟုတ် ဟထိုး) ရတဲ့ အသံနဲ့ ကြိယာအများစုဟာ ပြုသူကြိယာ (Active Verb) တွေဖြစ်ပြီးတော့ သိထိလ မူရင်းသံကတော့ ဖြစ်သူကြိယာ (Passive Verb) တွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဥပမာ ဖျက်ဆီး လို့ ပျက်စီးတယ်၊ ချိုးဖဲ့ လို့ ကျိုးပဲ့တယ် အစရှိတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သိထိလ အက္ခရာမဟုတ်တဲ့ ရကောက်နဲ့ လ အက္ခရာတွေမှာလည်း ဟထိုး ကပ်လိုက်ရင် Active ဖြစ်ပြီး မကပ်တာက Passive ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲပုံသေလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ ထိ နဲ့ တိ၊ ခင် နဲ့ ကင်၊ ချစ် နဲ့ ကျစ် ၊ လှုပ် နဲ့ လုပ် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလင့်ကတော့ သိထိလနဲ့ ဓနိတ ကြိယာအတွဲတွေ စုစည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိသလောက်စုံပြီထင်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ကြိယာတွေတော့ မပါပါ။ ဥပမာ ချိုးဖျက် ကျိုးပျက် အတွဲဆိုရင် ချိုး ကျိုး၊ ဖျက် ပျက် အတွဲတွေပဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒီထဲ မပါသေးဘူးထင်တာတွေ မှတ်ချက် ဝင်ရေးသွားပေးပါ။
Tags: burmese, Burmese active passive, Burmese characters, Burmese consonants, Myanmar, myanmarsar, ကြိယာ, ဓနိတ, ဗမာ, ဗမာစာ, ဗျည်း, မြန်မာ, မြန်မာစာ, သိထိလ
တစ်ခါတလေ မြန်မာစာတတ်တတ် မတတ်တတ် မထူးပါဘူး၊ ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးစားမရဘူးဆိုတာ ပြောသံကြားရင် စိတ်ဆိုးချင်တယ်။ မြန်မာဖြစ်ပြီး ဒီလိုပြောရကောင်းလားပေါ့လေ။ သေချာတွေးကြည့်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဆက်သွယ်စရာအကြောင်းမရှိရင်၊ ရှိရင်တောင်မှ တခြားဘာသာစကားနဲ့ ပြောဆိုလို့ ရနေသေးရင် မြန်မာစာတတ်ထားတာ အပိုလိုလိုဖြစ်နေတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိတော့ ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ဝံ့ကြွားလို့ရတာပေါ့လို့ပဲ ပြောစရာရှိမယ်။ ဂျပန်တို့ ထိုင်းတို့လို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဝင်ဆန့်ပြီးအထိုက်အလျောက်တိုးတက်နေတာမဟုတ်တော့လည်း မြန်မာလိုတတ်ရင် မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်သွားလုပ်လို့ရတာပေါ့လို့လည်း ပြောမရ။ မြန်မာလိုနကန်းတစ်လုံးမသိဘဲ ဂျင်ပေါ်ကထုံး လာလုပ်စားနေတဲ့လူတွေက ပိုများသကိုး။ စောစောက ဝံ့ကြွားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပဲ ပြန်ကောက်စရာရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ စာ ရှိတော့ ဂုဏ်ယူတာ ဒါ မာန်ပေါ့၊ ဇာတိမာန်။ မျိုးချစ်စိတ်။ ဒို့စာ၊ ဒို့စကား၊ လေးစားပါ၊ ချစ်ပါ၊ မြတ်နိုးပါ ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာ။
စကားမစပ် ဒီနေရာမှာ မြန်မာစာ၊ ဗမာစာ အသုံးကွဲနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း ပြောချင်သေးတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာစာဆိုတာ ဗမာစာပါပဲ။ မြန်မာစာသင်လို့ ရှမ်းလိုလည်း တတ်မသွားသလို မွန်လိုလည်း မဖတ်တတ်၊ ရခိုင်လိုလည်းမရေးတတ်ပါ။ မြန်မာဆိုတာ ဗမာရဲ့မူကွဲအသုံးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း ဗမာဆိုတာ ဗမာလူမျိုးကြီးတစ်ခုကိုသာ သုံးနှုန်းပြီး မြန်မာဟာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုခေါ်တာရယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ဆိုပုံပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် မြန်မာစာဆိုတာလည်း တိုင်းရင်းသား စာတွေ အကုန်ပါတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်ကဒီလိုမဟုတ် မြန်မာစာဟာ ဗမာစာသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တွေ့ဖူးတဲ့ ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားသူနိုင်ငံခြားသားများကတော့ ဗမာစာ Burmese/Bamarsar(Bamar Language) လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်။ “I speak/write Myanmese/Myanmar” လို့ ဘယ်သူမှမပြော၊ “I speak Burmese” သာ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံးသုံးဝေါဟာရ မြန်မာစာလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် မြန်မာစာလို့သာ ဆက်သုံးသွားပါမယ်။
ပြန်ဆက်ရရင် ရွှေမြန်မာတွေက အမျိုးချစ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတယ်။ နိုင်ငံတင်မဟုတ်၊ ပြည်နယ် တိုင်းဆိုလည်း ကိုယ့်ပြည်နယ်အားပေးလိုက်ရမှ၊ မြို့နယ်ဆိုလည်း ငါတို့ မြို့နယ်မှ၊ ရွာဆိုလည်း တို့ရွာမှ၊ ရပ်ကွက်ဆိုလည်း တို့ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာတောင် တို့အပိုင်း သူ့အပိုင်းဆိုတာက ရှိသေး။ ဒီတော့ မျိုးချစ်ကြတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိ။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာ။ အဲဒါမရှိရင် ပေါက်ဖော်ကြီးက လာလှီးလှီး၊ အန်ကယ်ဆမ်က လာပိတ်ပိတ် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ရေးချမဆိုင် ဘေးထိုင် လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ရတယ်။ ရှိလွန်းပြန်တော့လည်းမကောင်း။ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်တွေဖြစ်တော့ ဘေးလူဘေးတီးပေးတာနဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်ပတ်ချနေတော့ ဒါနဲ့ပဲလုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးဖြစ်နေရပေါ့။
အဲဒီတော့ ပြောချင်တာက မြန်မာစာမတတ်လည်း အရေးမကြီးဆိုသူများ အပြစ်မရှိကြောင်း၊ အပြစ်မပြောသင့်ကြောင်းပါ။ မြန်မာမှာတောင် တရုတ်၊ ကုလား၊ တိုင်းရင်းသားများ မျိုးဆက် သုံးလေးဆက်ခြားသွားရင် မြန်မာစိတ်ပေါက်လို့ မြန်မာလုံးလုံး ဖြစ်ကုန်တာ မေ့လို့မရ။ နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့ ရွှေများလည်း ကြာရင်အရောင်ပြောင်းမှာပဲ။ တရုတ်စာများလို သင်ချင်ရင်အလွယ်သင်ပေးမယ့်လူရှိတဲ့ ဘာသာစကား မဟုတ်လေတော့လည်း နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာမျိုးဆက်သစ်များ မြန်မာစာမတတ်တော့တာ သဘာဝလို့ နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ မြန်မာစာ တတ်ဖို့ အမှန်လိုအပ်တာပေါ့လို့ ခံယူထားသူများ အနေနဲ့တော့ သတ်ပုံလေးတော့ မှန်စေ့ချင်တယ်။ ပြည်တွင်း မြန်မာစာကို အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး သင်ကြားထားသူများ၊ မြန်မာလို နေ့တိုင်းပြောနေရသူများ အနေနဲ့ကတော့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနဲ့ သဒ္ဒါအထားအသိုကို အထူးဂရုစိုက်သင့်ကြောင်းပါ။ လူတစ်ယောက်ရေးတဲ့စာဖတ်ပြီး အဲဒီမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရအရေအတွက် သုံးနှုန်းပုံ ရေးသားပုံနဲ့ သတ်ပုံအကျအပေါက်ကိုကြည့်ပြီး ဒီလူ စာဘယ်လောက်ဖတ်လဲ မှန်းလို့ရတယ်။
ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းရဆို မဟုတ်လား။ ရခိုင်စာ၊ မွန်စာဆိုတာ ဗမာကိုလိုနီဖြစ်ပြီးကတည်းက တဖြည်းဖြည်းမှိန်လာလိုက်တာ အခုဘာကျန်လို့တုန်း။ ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရာကျမယ်။ နိုင်ငံ လူမျိုးတစ်ခု အားနည်းလာရင် သူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ စာ၊ ဘာသာစကားလည်း ရောပြီးချည့်နဲ့လာတာပဲ။ ဒီလိုပြောလို့ မြန်မာစာကွယ်တော့မယ်လို့ ပြောနေတာတော့မဟုတ်။ အခိုင်အမာရှိပြီးသား ဘာသာစကားတစ်ရပ်ကို တည်တံ့အောင်၊ တည်တံ့ရာကနေ ဖွံ့ဖြိုးအောင် မျိုးဆက် တစ်ဆက်ပြီး တစ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းရမယ် မဟုတ်ပေဘူးလား။ ထိန်းသိမ်းရုံပဲ ထိန်းသိမ်းထားရင် ကြာရင်ကောမှာပဲ။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်လောက် မြန်မာစာ ဖိနှိပ်ခံရတာ ဘယ်မှာ ရှိမလဲ။ ဒီကြားထဲကပဲ မြန်မာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေက ဆောင်ပုဒ်တွေ၊ ခံယူချက်တွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့ ခေတ်သစ်မြန်မာအရေးအသားတစ်ရပ်ကို ရောက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာပဲပြောပြော စာလုံးပေါင်းမှားမှန် တိုက်စစ်စရာ မြန်မာသတ်ပုံကျမ်းလည်းရှိပြီ။ (ကဝိလက္ခဏာကျမ်းလို ရှေးဟောင်းအရေးအသားတော်တော်များများကတော့ ခုခေတ်မှာ ဘယ်သူမှ မသုံးတော့။ သုံးတဲ့လူရှိသေးလား သိချင်တယ်။) မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းလည်းရှိပြီ။ ကဲ အခု ယူနီကုဒ်လည်းရှိပြီ။ ဆက်လုပ်သွားရမှာတွေက အများကြီးပဲ။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်တို့စခဲ့တဲ့ မြန်မာဝေါဟာရကျမ်းကို ထပ်ဖြည့်ရမယ်။ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို စုံသထက်စုံအောင် ထပ်ဖြည့်ကြရမယ်။ မြန်မာစာကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဘိုလိုဆောင်းပါးတွေလည်း ရေးရမယ်။ ဂန္ထဝင်စာအသစ်တွေ ပိုများလာအောင် ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်အသစ်တွေနဲ့ စာအသစ်တွေ အများကြီးရေးရမယ်။ ဘာသာပြန်ဆော့ဝဲ၊ အိုစီအာရ်၊ စာကနေစကားသံထွက်တဲ့ဆော့ဝဲ၊ မြန်မာစာကွန်ပျူတာစနစ်တွေ အများပြည်သူလက်ထဲ အလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။ မယ်… မယ်…. မယ်…။ လုပ်စရာတွေက အများကြီးပဲ။ အရေးမကြီးဘူး၊ မလိုဘူးထင်ရင်ဟိုနားသွားထိုင်၊ မျက်နှာလွှဲထားလို့ရတယ်။ ကြည့်မနေနိုင်ရင်တော့ လာကူပေးပါ၊ လူလိုနေတယ်။
Tags: bamar, burmese, language, Myanmar, ဗမာစကား, ဗမာစာ, ဗမာဘာသာ, မြန်မာစာ, မြန်မာဘာသာ
Burmese News Agencies Have Neither Orthography Standard Nor Proof Reading
BBC wrong spellings
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်က ဝီလျံမင်းသား မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ သတင်းမှာ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေတွေ့လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာအ”နန်း”တွေပေးပြီး “နုတ်”ဆက်ကြတာကို တော်ဝင်လေတပ်ကလည်း ဝေဟင်မှာ “ပြန်”ဝဲပြီးတော့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်?
အခုတော့ အနန်းကိုတော့ အနမ်းလို့ ပြင်လိုက်တာ တွေ့ပါတယ်။
ခုပဲ ဘီဘီစီက သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်တယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားတာတွေ အများကြီးပဲ။ ပရုမစင်ဘူးလို့ပြောရမလား။ တည်းဖြတ်တဲ့ အယ်ဒီတာကိုယ်တိုင်ကပဲ အမှားအမှန် မခွဲတတ်လို့လား မပြောတတ်။
၁။ သြဂုတ်လ – သ ရရစ်ထားတယ်။ ထားတော့ ဒါလက်ကွက် မရင်းနှီးလို့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၂။ ဝင်တိုက်မဲ့ – ဒါပေမဲ့ လိုစာလုံးပေါင်းမှာ နောက်ပစ်အောက်မြစ်နဲ့ ပေါင်းပါတယ်။ လုပ်မယ်၊ လုပ်မယ့် မှာ ယသတ်အောက်မြစ်နဲ့ ပေါင်းပါတယ်။
၃။ မသိပဲနဲ့ – မလုပ်ဘဲ မကိုင်ဘဲ မှာ မ+ဘဲ လို့ သုံးပါတယ်။ သူပဲ ငါပဲ ဒါပဲ တွေမှာမှ ပစောက်နဲ့ ပဲပါတယ်။
၄။ ဆော်ဒီဖက်က – လားရာ၊ ညွှန်ရာ ဘက်ကို ပြချင်ရင် ဘကုန်းနဲ့ ဘက်ပါတယ်။ လည်ပင်းဖက်၊ တွဲဖက်၊ ကျွန်းဖက် စတာတွေမှာ ဖဦးထုပ်နဲ့ ဖက်ပါတယ်။
၅။ အဆောက်အဦခေါင်မိုးပေါ်ကို – Building ကို အဆောက်အအုံလို့ ပေါင်းပါတယ်။ ကိရိယာ တန်ဆာပလာကိုမှ အဆောက်အဦရယ်လို့ ပေါင်းပါတယ်။ http://my.wiktionary.org/wiki/အဆောက်အဦ
၆။ သဂြိုဟ်ရမယ် – သက္ကတ သံဂြဟ ကလာတာပါ။ သင်္ဂြိုဟ် လို့ပေါင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဦးနေဝင်းကမကထ လုပ်ခဲ့တဲ့ သတ်ပုံကျမ်းကို မသုံးလိုတဲ့အတွက် အရေအတွက် တစ် နဲ့ပေါင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို စသတ်ဖြုတ်ထားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ သဘောမညီလို့ မသုံးဘူးဆိုတာထက် စံတစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှှတ်ထားပြီး သုံးမှသာ ဘာသာစကားတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ အထောက်အကူဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေကို ဘာကို စံပြုပြီး သုံးနေလဲ။ ကြုတ်ကျက်လိ စစ္စတမ်ပဲလား။
Tags: BBC, burmese, news, orthography, spelling, voa